Foko eto Madagasikara. Ny foko eto Madagasikara dia vondron
ⓘ Foko eto Madagasikara. Ny foko eto Madagasikara dia vondron olona isan ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-pôliti ..
Andriandravindravina, araka ny tetiarana sasany momba ny foko merina ao afovoan-tany eto Madagasikara, no mpanjaka voalohany tao aminio faritra io. Tsy Merina izy fa Vazimba, isanireo mponini Madagasikara voalohany. Ny boky Tantara ny Andriana eto Madagasikara, izay ahitana ny tetiaranny andriana merina, dia milaza fa Andriandravindravina dia nanjaka teo Ambohitsitakatra ao avaratrImerina nandevenana azy. Ireto avy ny zanany telo lahy: Andriananjavona izay nanorim-ponenana tao Anandribe ao andrefanAngavo. Andrianoranorana, lahimatoa, dia niorim-ponenana teo amoronny ranomasini Maroantsetra ...
Ny roipitika na roipitiky na roindambo na roy dia anarana omen ny Malagasy zavamaniry misy tsilo, anisan ireo antsoiny hoe roy. Hazo na hazo madinika mirefy 6 m hatramin ny 7 m ny roipitika, misy sampana be tsilo, maro sy madini-dravina, miendrika bola sy miloko fotsy manopy mavo ny voniny. Any amin ny faritra atsimo eto Madagasikara, manakaiky ny morontsiraka no ahitana azy betsaka. Maniry amin ny ala maina sy amin ny tany fasehana sy tany sira. Mahazaka ny rivotra maina sy ny rivo-dranomasina ny roipitika. Misy karazany maro ny zavamaniry atao hoe roipitiky na roipitika izay antsoina ami ...
Ny Bajao na Bajô na Sama-Bajao vondrom-poko any Broney, any Indônezia, any Malezia Atsinanana ary any Filipina, izay isan ny vahoaka atao hoe mpifindrafindra monina an-dranomasina toy ny Môkena any Birmania sy Tailandy, ny Ôranga Laota any Riau sy ny Oraka Laoy any Tailandy. Laharana faharoa ny Bajao amin ny habetsahana ao amin ny Fanjakana malzianan i Sabah, ka mahatratra ny 13 %n ny mponina ao. Ny Bajaon i Indônezia dia miaina indrindra eny amin ny nosy madinika sy ny morontsiraky ny nosy Sulawesi. Heverin ny maro fa ny fanjonoana sy ny fanaovana raharaham-barotra ny zanga no mitarika ny ...
Ny fiteny ao Afrika dia ireo fiteny tenenin ny mponin i Afrika, izay tombanana ho 2 000 any ho any, izay tenenin ny olona miisa 1 000 tapitrisa any ho any, nefa ireo fiteny be mpampiasa dia vitsy sady maro amin izy ireo no endri-piteny isam-paritra. Arakaraka ny fomba fiasan ny manampahaizana no anisana ho 200 na 2 000 ireo fiteny ireo. Ny 50 eo ho eo ihany no misy mpiteny mihoatra 1 000 any ho any. Akoatry ny fitenin ny mpanjana-tany dia ny maro dia maro ireo fiteny afrikana izay voasokajy ho fianakaviam-piteny dimy: ny fiteny afrô-aziatika na hamitô-semitika, ny fiteny nilô-sahariana, ny ...
ⓘ Foko eto Madagasikara
Ny foko eto Madagasikara dia vondron olona isan ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-pôlitika iraisany na nitoviany tamin ny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy izay atao hoe fitenim-paritra, sns. Tsy misy famaritana tokana eken ny maro ny hoe foko ka tsy fantatra noho izany ny tena isan ny foko eto Madagasikara. Mahazatra ny maro anefa ny miteny hoe "foko valo ambin ny folo" na dia tsy mifanandrify amin ny tena marina izany. Ao mantsy ireo izay milaza fa mihoatra ny roapolo ny foko eto Madagasikara. Ireo ataon ny Malagasy ankehitriny hoe "foko" ireo dia matetika vondrom-poko raha ny tena marina noho ny faritra misy azy midadasika loatra sy noho ny fisian ny vondrona maro ao anatin io vondrona lehibe io manana ny anaram-pokony manokana avy. Ny hafa indray dia mety zana-poko noho izy vitsy, monina amin ny faritra kely dia kely sady tsy mifankaiza amin ny foko mifanila faritra iaviana aminy na ara-piteny na ara-kolontsaina. Tsy singa amaritana ny atao hoe "foko" eto Madagasikara na ny toetra ara-batana toy ny fihodirana, na ny toetran ny volo, na ny toe-batana. Ny fitenenana amin ny fitenim-paritra koa dia matetika tsy heverin ny olona ho singa mamaritra ny atao hoe "foko" satria maro ny Malagasy avy amin ny foko na vondrom-poko iray izay mahay tenim-parirta roa na maro noho izy valovontaka.
1. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy
Ny Vezo dia vondrom-poko moninina any amin ny morontsiraka atsimo andrefan i Madagasikara izay mivelona indrindra amin ny fanjonoana an-dranomasina. Ao amin ny vondrom-poko Sakalava ny Vezo.
1.1. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Betsimisaraka
Ny Betsimisaraka dia vondrom-poko lehibe ao amin ny lemaka manaraka ny morontsiraka atsinanana, vafaritry ny reniranon i Bemarivo ao avaratra sy ny onin i Mananjary any atsimo. Ireto ny tanànan ny Betsimisaraka: Maroantsetra, Fenerivo,Soanierana-Ivongo, Toamasina, Vatomandry, Mahanoro ary Andevoranto. Niisa 1 500 000 any ho any ny Betsimisaraka tamin ny taona 2011.
1.2. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Tsimihety
Ny Tsimihety na Antandroña dia vondrom-poko any amin ny faritra avaratra-andrefana eto Madagasikara, ao amin ny faritanin i Mahajanga, monina amin ny faritra eo anelanelan ny tanin ny Antankarana avy ao avaratra, ny Betsimisaraka avy ao atsinanana, ny Sihanaka avy ao atsimo, ary ny Sakalava avy ao andrefana. Ireto ny tanàna lehibe any: Antsohihy, Mandritsara,Befandriana-Avaratra, Mampikony, Boriziny ary Bealanana. Eo anelanelan ny 700 000 sy 1 200 000 ny isan ny Tsimihety. Izy no foko fahefatra maro an isa indrindra eto Madagasikara.
1.3. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antambahoaka
Ny Antambahoaka dia vondrom-poko iray ao atsimo-atsinanan i Madagasikara, eo anelanelan i Sakaleona sy Namorona. I Mananjary no tanan-dehibe any. Niisa 50 000 any ho any ny Antambahoaka tamin ny taona 2013.
1.4. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antefasy
Ny Antefasy na Antaifasy na Tefasy dia vondrom-poko iray ao Madagasikara ao amin ny morontsiraka atsimo-atsinanana, ao amin ny faritra manodidina an i Farafangana. Eo anelanelan i Manampatra sy Mananara atsimo izy ireo, izany hoe eo afovoan ny Antemoro ao avaratra sy ny Antesaka ao atsimo. Tamin ny taona 2013 dia niisa 150 000 any ho any ny Antefasy.
1.5. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antemoro
Ny Antemoro na Antaimoro dia vondrom-poko ao amin ny faritra Vatovavy-Fitovinany. Nampalaza ny foko Antemoro teo amin ny tantara ny fanoratana ny Sorabe, ny famakiana ny kintana Fanandroana, fandravonana ny disadisa nisy tamin ireo foko sasany tany atsimon i Madagasikara. Eo anelanelan i Namorona sy Manampatrana no fonenany. I Vohipeno sy i Manakarano tanàna lehibe any aminy. Niisa 500 000 any ho any ny Antemoro tamin ny taona 2013.
1.6. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antesaka
Ny Antesaka na Antaisaka na Tesaka dia vondrom-poko iray ao atsimo-atsinanan i Madagasikara. Ao aminny distrikan i Vangaindrano,faritra Atsimo-Atsinanana, no betsaka azy ireo. Ny faritra onenany dia eo anelanelan i Mananivo ao avaratra, Itomampy syIonaivo ao andrefana, ary Lavibola ao atsimo. Tanàna lehibe ao aminy dia i Vangaindrano sy i Midongy Atsimo. Niisa 600 000 any ho any ny Antesaka tamin ny taona 2013.
1.7. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Bezanozano
Ny Bezanozano dia vondrom-poko ao amin ny tany lemaka manodidina an i Mangoro, voafaritry ny taniny onenan ny foko Sihanaka ao avaratra, ny Betsimisaraka ao atsinanana, ary ny Merina ao andrefana. Ireto ny tanàn-dehibe ao: Moramanga sy Beparasy ary Anjiro. Niisa 100 000 any ho any ny Bezanozano tamin ny taona 2011.
1.8. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Tanala
Ny Tanala na Antanala dia vondrom-poko ao amin ny faritra misy ny havoanan Ikongo, voafaritry ny tanin ny Betsileo ao andrefana, ny Betsimisaraka sy ny Antambahoaka sy ny Antemoro ary ny Antefasy ao atsinanana, ary ony Manampatrana ao atsimo. Ireto ny tanàna lehibe any: Ambohimanga Atsimo sy Ivohibe ary Ifanadiana. Miisa 400 000 any ho any ny Tanala tamin ny taona 2014.
1.9. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Zafisoro
Ny Zafisoro dia vondrom-poko malagasy monina any amin ny morontsiraka atsimo atsinanan i Madagasikara, ka ao amin ny distrikan i Farafangana no ahitana azy ireo betsaka. Heverina ho zana-pokon ny Antefasy ny Zafisoro sady mitovy faritra onenana amin ny Antefasy. Maro ireo etnôlôga no mihevitra fa ny Antefasy, sy ny Zafisoro koa, dia zana-pokon ny Antesaka. Eo amin ny 91 000 ny isan ny Zafisoro.
1.10. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antandroy
Ny Antandroy na Tandroy dia vondrom-poko ao aminny tendron i Madagasikara atsimo indrindra monina amin ny tany eo anelanelan ony Menarandra ao andrefana sy Mandrare ao atsinanana ary ny havoana Vohimainty ao avaratra. Niisa 600 000 any ho any ny Antandroy tamin ny taona 2013.
1.11. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Antanosy
Ny Antanosy na Tanosy dia vondrom-poko ao amin ny tendron i Madagasikara atsimo-atsinanana indrindra, ao amin ny faritra Anosyeo anelanelan i Masianaka sy Mandrare no misy azy betsaka indrindra, nefa ahitana azy koa ny tanàna toa an i Bezaha sy i Vatolatsaka ao amin ny distrikan i Betioky-Atsimo ary any Bereketa distrikan i Sakaraha any amin ny faritra Atsimo-Andrefana. I Tolagnaro no tanàn-dehiben izy ireo. Niisa 360 000 any ho any ny Antanosy tamin ny taona 2013.
1.12. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Mahafaly
Ny Mahafaly dia vondrom-poko monina amin ny misy havoana marin-tampona midadasika, be sokay sy fasika, eo anelanelan ony Onilahy sy Menarandra, any amin ny faritra Atsimo-Andrefana. Ny tanàna lehibebe misy ny Mahafaly: Betioky-Atsimo sy Ejeda ary Ampanihy. Niisa 150 000 any ho any ny Mahafaly tamin ny taona 2013.
1.13. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Sakalava
Ny Sakalava dia vondrom-poko monina amin ny tany midadasika dia midadasika any amin ny tapany atsimo-andrefana sy andrefana ary avaratra-andrefan i Madagasikara, eo anelanelan Ampasimena any avaratra, sy Toliara any atsimo. Mizara efatra Sakalava, dia ny Sakalavan i Boina renivohitra: Mahajanga, ny Sakalavan Ambongo renivohitra: Besalampy, ny Sakalavan i Menabe renivohitra: Morondava ary ny Sakalavan i Fiherenana renivohitra: Toliara: ny Vezo sy ny Masikoro dia heverina ho zana-pokon ny Sakalavan i Fiherenana. Ireto ny tanàn-dehibe ao amin ny tanin ny Sakalava: Mahajanga, Besalampy, Morondava, Toliara, Analalava, Maintirano ary Morombe. Niisa 1 210 000 any ho any ny Sakalava tamin ny taona 2014.
1.14. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Makoa
Ny Makoa dia vondrom-poko monina ao amin ny morontsiraka avaratra andrefan i Madagasikara. Ny mponina ao ampovoan-tanin i Madagasikara dia miantso azy ireo hoe Masombika. Indraindray izy ireo dia heverina ho zana-pokon ny Vezo, izay foko ao anatin ny Sakalava.
1.15. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Masikoro
Ny Masikoro dia vondrom-poko any amin ny morontsiraka atsimo andrefan i Madagasikara izay mivelona indrindra amin ny fiompiana sy ny fambolena. Niisa 90 000 ny Masikoro tamin ny taona 2001.
1.16. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Mikea
Ny Mikea dia vahoaka malagasy monina any anaty ala any amin ny faritra-atsimo andrefan i Madagasikara, izay mivelona amin ny fihinanana ny zavamaniry sy ny biby any anaty ala. Tombanana ho 1 500 any ho any ny Mikea.
1.17. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Vezo
1.18. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Merina
Ny Merina dia vondrom-poko monina ao afovoan i Madagasikatra, eo amin ny tampon-kavoana voafaritry ny tanin i Vonizongo ao avaratra, ny tendrombohitr Ankaratra ao atsimo, ny reniranon i Sakay ao andrefana, ary ny tandavan-tendrombohitr Angavo ao atsinanana. Ireto ny tanàn-dehibe misy ny Merina: Antananarivo, Antsirabe, Ambatolampy, Arivonimamo, Miarinarivo, Manjakandriana ary Soavinandriana. Niisa 5 000 any ho any ny Merina tamin ny taona 2013.
1.19. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Sihanaka
Ny Sihanaka dia vondrom-poko monina manodidina ny farihin Alaotra, voafaritry ny renirano Bemarivo Ambony sy Tampoketsa Atsimo ao avaratra, ny renirano Mahajamba Ambony ao andrefana, ary ireo havoana misy ny Bezanozano sy ny ala ao atsinanana. Ny tanàna lehibe any dia Ambatondrazaka. Miisa 200 000 any ho any ny Sihanaka.
1.20. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Betsileo
Ny Betsileo dia vondrom-poko lehibe ao amin ny toerana faritan ony Mania ao avaratra, ny tanin ny Tanala ao atsinanana, ny tendrombohitr Andringitra ao atsimo, ary ny tandavan-tendrombohitr i Bongolava ao andrefana, izany hoe ao amin ny Faritanin i Fianarantsoa. Ireto ny tanànan ny Betsileo: Ambositra, Ambohimahazo, Ambohinamboarina, Fianarantsoa, Ambohimahasoa ary Ambalavao. Tombanana ho 4 359 000 any ho any ny isan ny Betsileo.
1.21. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Zafimaniry
Ny Zafimaniry dia vondrom-poko monina ao amin ny tapany atsimo atsinanan ny faritra afovon i Madagasikara, izay azo heverina ho zana-pokon ny Betsileo, nefa mifanakaiky kolontsaina koa amin ny Tanala. Tombanana eo amin ny 25 000 eo ho eo ny Zafimaniry tamin ny taona 2008.
1.22. Ireo foko malagasy araka ny faritra misy azy Ny Bara
Ny Bara dia vondrom-poko monina amin ny toerana midadasika voafaritry ny renirano Zomandao any avaratra mampisaraka azy amin ny Betsileo, ny faritra onenan ny Tanala any atsinanana, ony Onilahy any atsimo andrefana mampisaraka azy amin ny Antandroy sy ny Mahafaly, ary ny tangoron-tendrombohitra Analavelona ao andrefana sy avaratra-andrefana. Ny tanàn-dehibe ao aminy dia Ihosy sy i Betroka. Tanàna bara koa i Sakaraha sy i Ankazoabo ary i Beroroha. Niisa 520 000 any ho any ny Bara tamin ny taona 2013.
Fifindra-monina jiosy taty Madagasikara
Mponina eto Madagasikara
Zanaka am-pielezana malagasy any Frantsa
Ny foko tsirairay eto Madagasikara
Antefasy - Antemoro - Antesaka - Antankarana - Antambahoaka - Antandroy - Antanosy - Bara - Beosy - Betsimisaraka - Betsileo - Bezanozano - Mahafaly - Makoa - Masikoro - Merina - Mikea - Sakalava - Sihanaka - Tanala - Tsimihety - Vezo - Zafimaniry - Zafisoro.
Ny foko ara-tantara teto Madagasikara
Vazimba - Antalaotra
Wikipedia: Foko eto Madagasikara